महामारीमा संवेदना - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
-- अभय श्रेष्ठ / प्रकाशित मिति : शनिबार, बैशाख २५, २०७८
‘कोरोना भाइरसमा उत्परिवर्तन (म्युटेसन) भइराखेमा सम्भवतः हालको भ्याक्सिनले कामै नगर्ने नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको उत्पत्ति हुन सक्छ । त्यसकारण भाइरस नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन बनाउनु जतिकै महत्वपूर्ण छ डार्विनको उत्पत्तिको सिद्धान्त बुझ्नु ।’ गत माघ २८ गते कान्तिपुरमा विज्ञान स्तम्भकार उत्तमबाबु श्रेष्ठले लेखेका यी शब्द मननीय छन् । संसारभरि र नेपालमै पनि दुई डोज कोरोना खोप लगाइसकेकालाई पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएपछि यस्तो महसुस हुनु स्वाभाविक हो । हामी कामना गरौँ, अहिले उपलब्ध खोप कामै नलाग्ने गरी कोरोना भाइसको उत्परिर्तन भइसकेको नहोस् । मानव सभ्यतालाई नै धक्का दिने खालको परिस्थिति आइसकेको कल्पना अहिल्यै नगरौँ । तर त्यसप्रति सचेत रहनुचाहिँ अनिवार्य छ ।
सन् १८५९ नोभेम्बर २४ मा बेलायतका जीव वैज्ञानिक चाल्र्स डार्विनको संसारको विचारलाई नै बदलिदिने किताब ‘अन द ओरिजिन अफ स्पेसिज’ छापियो । सात वर्षअघि बेलायतको फोलियो सोसाइटीले त्यतिन्जेलको सबैभन्दा प्रभावशाली पुस्तकबारे मत संकलन गर्दा सबैभन्दा प्रभावशाली बीस पुस्तकमध्ये डार्विनको यही पुस्तक शीर्ष स्थानमा रह्यो । डार्विनका अनुसार जीवन संघर्षका क्रममा आइपर्ने प्राकृतिक व्यवधान, जस्तै रोगव्याधी, जयवायु परिवर्तन, बास समस्या, खाना र प्रजननका लागि अन्य समूहसँग हुने प्रतिस्पर्धा आदिका कारण जीवहरूमा आउने नयाँ गुणहरूको छनोटका लागि दबाब झेल्नुपरिरहेको हुन्छ । यस्तो दबाबले जीवनलाई नयाँ परिस्थितिमा फिट हुन उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ ।
डार्विनका अनुसार हरेक जीव अर्थात् मान्छे, भाइरस, ब्याक्टेरिया, वनस्पति सबैका लागि प्राकृतिक छनोटको उही नियम लागू हुन्छ । प्रतिकूल परिस्थितिमा फिट हुन जीवले जुन अंग बढी आवश्यक छ, त्यसलाई सक्रिय राख्छ र उसका भावी सन्तानमा क्रमशः त्यही अंग बढी विकसित हुँदै हुँदै जान्छ । कोरोना भाइरसले पनि गर्ने त्यही हो । मान्छेले रोगबाट बच्न विभिन्न औषधि र भ्याक्सिन ल्यायो । हाम्रो शरीरमा हुने भाइरसले आफू बाँच्नलाई त्यसविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको हुन्छ । धेरैजसो अवस्थामा भाइरस र ब्याक्टेरिया औषधिसँग पराजित हुन्छ र मर्छ । तर यदाकदा असंख्य भाइरस वा ब्याक्टेरियाको समूह औषधिको आक्रमणविरुद्ध संघर्ष गर्दागर्दा उत्परिवर्तन भएर औषधि टाँसिन जाने उसको शरीरको अंग नै गायब हुन्छ । यस्तो अंग नै हराएपछि औषधि प्रभावहीन हुन पुग्छ । औषधिलाई प्रभावहीन बनाउने भाइरस वा ब्याक्टेरियाको यही गुणलाई प्रकृतिले छनोट गर्छ र भावी पुस्ताका भाइरसलाई त्यस्ता औषधिले मार्नै नसक्ने हुन्छ । तिनलाई मार्न फेरि अनुसन्धान गरेर त्यही प्रकृतिको नयाँ औषधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । भाइरस वा ब्याक्टेरिया निकै छिटो प्रजनन हुने लचिला आनुवांशिक गुण भएका जीव हुन् । मान्छेलगायत ठूला जीवमा यस्ता परिवर्तन देखा पर्न करोडौँ वर्ष लाग्ने हुन्छ । तर, उत्परिवर्तनले ल्याउने परिवर्तन र परिवर्तित स्थितिमा अनुकूल भएर बाँच्न भाइरसहरूलार्ई धेरै समय लाग्दैन ।
हाल कोरोना भाइरसका नयाँ प्रकारहरू देखा परिरहेका छन् । यसको तेस्रो प्रकार पनि देखा परिसकेको समाचारहरू आएका छन् । हाल उपलब्ध खोपले नयाँ प्रकारको भाइरसलाई समेत नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । सायद यो दोस्रो प्रकारको भाइरससम्मलाई मार्ने खोप हो । तेस्रो प्रकारको भाइरस हालै देखा परेकोले सायद यसले काम नगर्न सक्छ । त्यसका लागि नयाँ प्रकारको भाइरसको अध्ययन गरी त्यसै अनुसारको नयाँ खोप बनाउनु जरुरी हुन्छ होला । दुई पल्ट खोप लगाइसकेकालाई पनि कोभिड पोजिटिभ देखिनुको कारण यही हुन सक्छ । अथवा खोप लगाए पनि केही प्रतिशत मान्छेलाई यसले काम नगर्ने भनिएअनुसार नै भएको पनि हुन सक्छ ।
डार्विनको उत्परिवर्तन सिद्धान्त बुझेर कोरोना भाइरसको सम्भावित नयाँ उत्परिवर्तनलाई समेत मार्न सक्ने खोप बनेपछि नै बल्ल कोरोना प्रकोपको अन्त्य हुन्छ होला । तर, कोरोनाको उत्परिवर्तनकै गतिमा नयाँ खोप बन्नु जरुरी हुन्छ जुन कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
मलाई कोरोनाको प्रकोप र भयावह स्थितिबारे सकेसम्म कुनै समाचार वा आलेख पढ्नु नपरोस् भन्ने लाग्छ । त्यसले ल्याउने भयावह मानसिक स्थितिलाई शब्दमा वर्णन गर्न गाह्रो छ । तथापि त्यसबाट भाग्न सकिन्न । यस परिस्थितिमा आफै त्यसबारे लेख्न बाध्य छु जसले थोरै संख्यामा भए पनि मान्छेलाई बचाउन योगदान ग¥यो भने ठूलो कुरा हुन्छ ।
स्थिति जति भयावह भए पनि त्यसबाट बच्न सचेत हुनु उत्तिकै जरुरी छ । छिमेकी मुलुक भारतको हालत हेर्ने हो भने स्थिति अत्यासलाग्दो छ । त्यहाँ प्रतिदिन झन्डै चार लाख नयाँ रोगीहरू देखा परिरहेका छन् । यो त पीसीआर टेस्टबाट औपचारिक रूपमा प्रमाणित आँकडा भयो । परीक्षण गर्न नसक्ने र नपाएका अरू कति रोगी होलान् । अनि प्रतिदिन झन्डै चार हजारको संख्यामा त्यहाँ संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ । रोगीले उपचार पाइरहेका छैनन् । उपचार पाउनेले पनि अक्सिजन पाउन हम्मे छ । त्यहाँ भाइरसको तेस्रो प्रकारसमेत भेटिइसकेका समाचारहरू आइरहेका छन् । भारतको त्यो भयावह स्थिति नेपालमा नआउला भनेर ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल र डाक्टरहरूले यहाँ पनि हात उठाउन थालिसके । प्रतिदिन यहाँ पनि पाँच हजार नयाँ संक्रमित देखा पर्न थालिसके । गम्भीर बिरामीले समेत अस्पतालमा बेड नपाउने स्थिति आइसक्यो । अक्सिजनको अभाव उस्तै छ । पहुँचवालाले बाहेक अब गरिब र पहुँचविहीनले उपचारै नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने भयावह स्थिति सामुन्ने छ ।
यस स्थितिमा सरकार छ, उसले बचाउँछ भनेर निश्चिन्त रहनु अत्यन्त आत्मघाती निर्णय हुनेछ । हामीकहाँ सरकार कस्तो छ, त्यो लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा हालैका सत्ताका खेल हेरे काफी हुन्छ । केन्द्रको हालत त बताइसक्नु छैन । सरकार जोगाउने वा ढाल्ने खेलमै चौथो ठूलो पार्टी फुटको सँघारमा छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल मात्र होइन, संसारभरिका सबैले दुई सूत्र मन, वचन र कर्मले पालना गर्नु जरुरी छ । एक, म आफूलाई कोरोना लाग्न दिन्नँ । दुई, कथम् लागिहाले अरूलाई सार्दिनँ । त्यसका लागि हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका सबै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । त्यसले कोरोनाबाट मात्र होइन, अन्य रोग लाग्नबाट समेत बचाउँछ । साथमा फोक्सो, मुटु र शरीरका अन्य अंगलाई मजबुत पार्ने, शरीरलाई अक्सिजन आपूर्ति गर्ने प्राकृतिक तरिका, योग अभ्यास गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । दक्ष योग गुरुहरूका युट्युबमार्फत हामीले यो अभ्यास सिक्न र गरिरहेकाले निरन्तरता दिनु अनिवार्य छ ।
अक्शन के हो? अक्शनमा प्रोपर्टी कसरि किन्ने? कस्तो होशियारी अपनाउनु पर्छ ?
सत्यसँग नझुक्ने ओलीतन्त्र
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बारले तोक्यो एमिकस क्युरी
काठमाडौं– नेपाल बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि माग गरिएको...
२४ घण्टामा ४१ संक्रमितको निधन
काठमाडौं– पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७ सय ४५ जनामा कोरोना भाइरसको...
नेपालमा १६९४ संक्रमित थपिए, ४६ को मृत्यु
काठमाडौं– नेपालमा कोरोनाभाइरसका एक हजार ६९४ सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस...
अष्ट्रेलियासंग नेपाल पराजित
काठमाडौं- नेपालले विश्वकप फुटबल २०२२ र एशिया कप फुटबल २०२३ को छनोटको...
नेपालमा ३ हजार ७ सय ५० जना संक्रमित थपिए
काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ३ हजार ७...
नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५५ हजार ५ सय ३२
काठमाडौं– पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा २४ सय ४२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण...